Jimmy Iovine: "noocii ugu horreeyay ee Apple Music wuxuu ahaa mid hami badan leh" | Waxaan ka socdaa mac
Maamulayaasha Apple Music Jimmy Iovine iyo Bozoma Saint John ayaa abaal mariyay a wareysi ilaa BuzzFeed News halkaasoo ay kaga hadlayaan qaabeynta cusub ee adeegga muusigga ee durdurinta Apple. Hadaladaas waxay sidoo kale muujinayaan waxa ay ka qabaan qaar ka mid ah astaamaha cusub waxayna ka jawaabaan dhaleeceynta ku saabsan waxyaabaha ka reeban muusikada.
Waxyar uun kadib markii lasii daayay albumkii ugu dambeeyay ee Frank Ocean "Blonde," Kooxda Universal Music Group ayaa mamnuucday bixinta sii deynta gaarka ah ee adeegyada hoorinta muusikada. Iovine ayaa u sheegay BuzzFeed News in Apple qorshe uma lahan inay noqoto sumad muusig, laakiin isagu ma garanayo qaab kale oo Apple Music ay gacan uga geysan karto soo saarista iyo qaybinta muusikada weyn.
1 Apple Music, gaar ah iyo adeegyo bilaash ah
1.1 Iovine wuxuu weeraraa rukumo bilaash ah
2 Dib u qaabeynta Apple Music
2.1 Liisaska khaaska ah
Apple Music, gaar ah iyo adeegyo bilaash ah
"Waxbadan ayaan galnay arintan, waxaan soo hoynay guulo dhab ah, mar walbana waxaan joognaa meesha aan xiriirka ka leenahay," ayuu yiri Iovine, isagoo ku adkeysanaya inuusan ujeedo lahayn inuu duulaan ku qaado dhulka sumadaha. "Waxaan sameyneynaa wadadeena, waxaanna aragnay waxa shaqeynaya… Mar kasta oo aan sameyno wax gaar ah, waxaan barannaa wax cusub. Wuxuu intaas ku daray in Apple Music ay horay u marin doonto raadinta waxyaabaha gaarka u ah lamaanayaasha kale, sida Sony Music Entertainment iyo Warner Music Group, isagoo xusay, “Waa showgii Apple. Ilaa iyo inta Apple ay i weydiineyso inaan sameeyo waxa aan sameynayo, waan sii wadi doonaa inaan sameeyo. "
Iovine wuxuu weeraraa rukumo bilaash ah
Iovine wuxuu sii waday inuu sheego inuusan garanaynin haddii kala-baxa suuqa muusigga, oo leh adeegyo kala duwan oo bixiya waxyaabo gaar ah, ay waxyeello u geysanayso ama caawinayso warshadaha muusikada, laakiin isagu wuu ogyahay. aaminsan yahay in adeegyada bixiya ikhtiyaarrada dhageysiga bilaashka ah ay waxyeello leeyihiin.
"Kuwa xuquuqda leh, cidkasta oo ay yihiin, waa inay wax qabtaan, maxaa yeelay waxaa jira banaanka [muusig] badan oo bilaash ah, waana dhibaato," ayuu u sheegay BuzzFeed News. Iovine wuxuu leeyahay aduunka waxaa kajira muusig bilaash ah oo dadku is weydiiyaan hadii ay uqormayaan adeeg.
Dib u qaabeynta Apple Music
Ku saabsan naqshadeynta cusub ee Apple Music, qoraalka ugu weyn iyo qaabka ugu fudud waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha aan khibrad hore u lahayn howlaha soo dejinta, oo ay ku jiraan waayeelka iyo dhagaystayaasha caalamiga ah, sida laga soo xigtay BuzzFeed News. Isbedelada qaar, sida u wareejinta tabka "My Library" bogga hore iyo meesha ku taal tabka bidix ee hoose, waxaa looga dan leeyahay in arrimaha la fududeeyo.
Bozoma Saint John ayaa sidaa tidhi mid ka mid ah su’aalihii ay weydiisay Apple xilligii dib u qaabeynta ayaa ahayd sida dadku ula falgalaan muusiggooda inta lagu jiro maalin caadi ah. Shirkadda Cupertino waxay isku dayday inay ogaato waxa adeegsadayaashu ka dhex raadinayaan Apple Music iyo sida shirkaddu sida ugu fiican ugu adeegi karto.
Liisaska khaaska ah
Taas waxaa ka mid ah liiska cusub ee algorithm-ku-saleysan ee Apple Music. Apple waxay isticmaashaa xogta muusikada ee iTunes, kuwa ugu cadcad, iyo tirinta ciyaarta si loo go'aamiyo waxa laga ciyaarayo liisaska cusub ee "My New Music Mix" iyo "My Favorites Mix".
Apple shaashaddiisa shaashad qalooca
Liiska My Favorites wuxuu bixiyaa khibrad dhow iyada oo loo marayo muusikada ugu caansan uguna dhageysiga badan isticmaalaha, halka liiska My Music cusub uu bixinayo heeso dhowaan la soo kordhiyay, oo ay ku calaamadeysan yihiin tifaftireyaasha Apple Music, kuna saleysan astaanta isticmaalaha. Liisaska badan ee shakhsiyadeed ee shakhsiyadeed ayaa iman doona Apple Music laakiin kaliya ka dib markii shirkaddu ay si fiican u tijaabisay oo ay ogaatay inay keeni karaan dhammaan natiijooyinka suurtogalka ah.
Ugu dambeyntiina, Iovine ayaa sidaa yiri nooca koowaad ee Apple Music wuxuu ahaa mid hami badan, iyo in shirkaddu "u badan tahay" inay wax badan gelisay goor dhow. Waxa uu sheegay in Apple ay ka muuqatay, oo hadda ay wax u socoto si xawli ah. Iovine ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay taas war ayaa iman doona Apple Music oo aan cidna «arkin soo socda».
Maxaad u maleyneysaa inay ka diyaarin doonaan Cupertino mustaqbalka Apple Music?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Jimmy Iovine: "noocii ugu horreeyay ee Apple Music wuxuu ahaa mid hami badan leh"